Soo hel Taawarka Hercules ee magaalada A Coruña | Wararka Safarka
Imaatinka Roomaanku jasiiradeenna wuxuu uga tegey shuqullo iyo taallooyin badan oo ilaa maanta la hayo. Xariifnimada dhismaha ee Roomaankan Roomaanku waxay abuurtay dhismayaal weli ku jira xaalad qumman, sida Tower of Hercules oo ku taal buur ku taal magaalada A Coruña ee Galicia.
Este laydhka iyo qalcadda waa munaarad weyn oo ka soo baxda badda horteeda. Maanta waa mid ka mid ah astaamaha magaalada A Coruña, waxayna leedahay taariikh weyn oo ka dambeysa. Waxaan ogaan doonnaa taaladan iyo waxa aan ka arki karno magaaladan ku taal woqooyiga Galicia.
1 Macluumaadka Tower of Hercules
2 Khuraafaadka la xiriira munaaradda
3 Taariikhda Tower of Hercules
4 Booqo Tower of Hercules
5 Maxaa lagu arkaa A Coruña
Macluumaadka Tower of Hercules
Munaaraddani waxay ku taal magaalada A Coruña, oo ku taal buur yar oo badda fiirisa. Waxay qiyaastii 50 mitir ka sarreysaa heerka badda oo hareeraheeda waa Park farshaxan ee Tower of Hercules, oo ah matxaf hawada furan. Iibka tigidhada waxaa lagu sameeyaa Xarunta Macluumaadka Booqdaha iyo Feejignaanta, laga bilaabo 9.45 subaxnimo ilaa 17.15 galabnimo. Isniinta iridda waa bilaash laakiin waa inaad si uun uga soo qaadataa xaruntan.
El gelitaanka munaaradda waxaa lagu sameeyaa jajabyo 15 daqiiqo ah kooxo ugu badnaan 17 qof ah. Waa inaan ogaannaa si aad u gaadho xagga sare waa inaad fuushaa wax ka badan laba boqol oo tallaabo, markaa waa inaad diyaar u tahay inaad sameyso jimicsi yar.
Khuraafaadka la xiriira munaaradda
Waxaa jira halyeeyo kala duwan oo lala xiriirinayo munaaraddan. Mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan ayaa ah tan Hercules, oo goobtaas u adeegsaday inuu ku aaso madaxii weynaa ee Geryon ka dib markii uu ku garaacay dagaalka. Waxaa sidoo kale la sheegay in meeshani ay ahaan lahayd Tower of Breogán oo laga soo xigto sheekooyinka Irish, ee wiilka Breogán, Ith uu ka arki lahaa xeebaha Ireland.
Taariikhda Tower of Hercules
Asalkeeda lama oga, maxaa yeelay waa munaarad ay dib u dhiseen Roomaanku qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga. Waxaa asal ahaan loo dhisay sidii ileys iftiin socdaal ah meesha uu ku yaalo darteed. Waxay dhacday intii lagu jiray boqortooyadii Nero iyo Vespasian. Dhismaha Roomaanka xilligan waxaa laga arki karaa oo keliya gudaha, tan iyo intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad waxaa lagu soo celiyay qaab neoclassical ah oo banaanka laga arki karo. Bilowgeeda waxay ahayd munaarad afargeesle ah oo leh daaqado aan sinnayn. Qaybta kore waxaa lagu daray mar dambe waxayna umuuqatay xilliyadii dhexe inay u adeegtay sidii munaarad difaac ah oo ka badan laydh.
Iftiinkaan ayaa lagu dhawaaqay Goobta Dhaxalka Adduunka ee 2007. Sanadkii 2008 waxaa lala mataaneeyey taalada caanka ah ee xorriyadda ee magaalada New York ka dibna waxaa lala simay Morro de la Habana Lighthouse, oo ah kan ugu da'da weyn dhammaan Ameerika.
Booqo Tower of Hercules
La munaaraddu waxay leedahay dherer dhan 55 mitir waxaana si fudud looga arki karaa meelaha kala duwan ee magaalada. Waxay ku taal meel xasilloon, oo ay ku wareegsan tahay jardiinno farshaxan ah oo bixisa meel aad u wanaagsan oo lagu dhex lugeeyo oo lagu raaxeysto xeebta badda kahor intaan la gelin munaaradda.
Markaynu nimaadno munaaradda waa inaynu yeelannaa soco 234 tallaabo si aad sare u gaartid. Gudaha gudaheeda waxaad ku arki kartaa darbiyada Roomaanka ee munaaraddii hore ee laba jibbaaran, oo maanta lagu daboolay wajiga neoclassical. Dib-u-habeynta jaranjaro dhagax ah oo gudaha ah ayaa lagu dhisay. Sida muuqata jaranjarada hore ee munaaraddii Roomaanka waxay lahayd qaybo bannaanka ka ah waxaana laga sameeyay alwaax. Saldhigga oo maraya dhammaan tallaabooyinka waxaad ka gaareysaa aragtida, taas oo ay ka jiraan aragtiyo cajaa'ib leh oo ah A Coruña.
Laydhkan shidan ayaa wali shaqeynaya, habeen walbana shaqadiisa ayaa bilaabata. Waad arki kartaa sida laydhku u shidayo afar nal 20 daqiiqadood oo wareeg ah. Kuwan biligleynaya waxay gaarayaan 24 mayl badda. Maalmaha ceeryaantu waxay leedahay sidoo kale dhawaaq la maqli karo. Shaki la'aan waa shaqo weyn oo Roomaan ah oo xaqiijisay qiimaheeda in ka badan laba kun oo sano.
Maxaa lagu arkaa A Coruña
Markaan u safreyno si aan u aragno Daarta cajiibka ah ee Hercules, waxaan booqan karnaa magaalada A Coruña. Ku Rosa dos Ventos Waxay ku taal agagaarka munaaradda waana mosaic weyn oo sida compass oo kale ah. Magaaladan sidoo kale waxay leedahay xeeb magaalo, Playa de Riazor, oo u taagan inay yeelato dhammaan noocyada adeegyo, leh weji weyn iyo sidoo kale mowjado badan oo ku xiran maalinta.
La Maria Pita Square waa bartamaha magaalada, halkaas oo aad ku raaxeysan karto jawiga ugu fiican. Suuqa Plaza de Lugo waxaad ka iibsan kartaa cunnooyinka badda iyo kalluunka ugu wanaagsan ee laga helo estuaries ee ka dhigaya Galician gastronomy mid caan ah. Sidoo kale waa inaad ku raaxaysataa aragtiyada ay bixiso Mirador de San Pedro casriga ah, adigoo ku socda baabuur ama madadaalo gaar ah oo soo jiidata indhaha oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Tower of Hercules
Ciidaha jasiiradaha Griiga